FAO iyo WFP oo ku bahoobay qorshe lagu howl-gelinayo suuq-geynta dalag-yada beeraha Soomaaliya – Radio Daljir
FAO iyo WFP oo ku bahoobay qorshe lagu howl-gelinayo suuq-geynta dalag-yada beeraha Soomaaliya
Diseembar 17, 2013 1:57 b 0
Nairobi, December 17, 2013 – Qaramada midoobey ayaa diyaarisay qorshe lagu soo noolaynayo hanaankii suuq-geynta dalagyada beeraha Soomaaliya oo meesha ka baxay 22 sano oo dagaalo iyo kala carar lagu jiray.
Hay?adda cunada aduunka ee WFP iyo hay?adda kale ee cunada iyo beeraha ee FAO ayaa shalay ku bahoohay qorshe balaaran oo lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo in la suuq-geeyo wax soo saarka beeraha dalka.
Qorshaha cusub ee ay fulinayaan WFP iyo FAO waxaa maal-gelinaya midowga Yurub.
FAO ayaa sheegtay inay sanadihii u dambeeyey taageertay beeralayda Soomaaliya iyadoo ka caawiday dhinacyada qalabka, dalaga iyo biyaha, taas oo sahashay in la? helo wax soo saar badan, sida uu sheegay madaxa FOA ee beeraha Jose Lopez.
?haatan waxaan diyaarinaynaa inaan ka taageerno suuq-geynta wax saarka beeralayda.? Ayuu hadalkiisa ku sii daray Jose
Beeralayda Soomaaliya ayaa amaanay qorshaha ay damacsan yihiin hay?adaha gargaarka, xoghayaha guud ee beeralayda Soomaaliya Maxamed Cabdinuur ayaa qorshe wanaagsan ku tilmaamay in la fahansiiyo beeralayda inay tijaabiyaan faa?idada wax soo saarkooda iyo waxqabadka ay muujiyeen.
Ra?isal wasaaraha dalka oo loogu baaqay in uusan xukuumadiisa ku darin wasiiradii la cayriyey